2015 ကို IEEE အသံလွှင့်စာတမ်းဖတ်ပွဲ, Orlando တွင်ဖလော်ရီဒါအတွက်အောက်တိုဘာ 13-15 - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » အသားပေး » Orlando တွင်ဖလော်ရီဒါအတွက် 2015 ကို IEEE အသံလွှင့်စာတမ်းဖတ်ပွဲအောက်တိုဘာ 13-15
Orlando တွင်ဖလော်ရီဒါအတွက် 2015 ကို IEEE အသံလွှင့်စာတမ်းဖတ်ပွဲအောက်တိုဘာ 13-15
အဆိုပါကို IEEE အသံလွှင့်နည်းပညာလူ့အဖွဲ့အစည်း (BTS) သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများထိန်းသိမ်းခြင်းအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောအစည်းအဝေးများ, တင်ပြချက်များ, ဖြစ်ရပ်များ, ညီလာခံများနှင့်လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များမှတဆင့်၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်များပညာပေးခွငျးအားဖွငျ့ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာတိုးတက်ထံအပ်နှံနေတဲ့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်ကောင်စီဖြစ်ပါတယ်။ ကို IEEE BTS ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း 2,000 အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အခန်းကြီးထက်ပိုရှိပြီး Piscataway, နယူးဂျာစီအတွက်၎င်း၏ဌာနချုပ်ရှိတယ်။
အောက်တိုဘာ 13 တွင်, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာများ 2015 ကို IEEE အသံလွှင့်စာတမ်းဖတ်ပွဲ, အသံလွှင့်နည်းပညာအပေါ်ကမ္ဘာ့ဉီးနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာညီလာခံ၏တဦးတည်းအဘို့, Orlando တွင်ဖလော်ရီဒါအတွက် Carib Royal Hotel မှာစုဝေးစေမည်။ ဒီနှစ်မှာတော့ရဲ့စာတမ်းဖတ်ပွဲလဲ tutorial နှင့်နိုင်ငံအများအပြားကနေထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအားဖြင့်ဦးဆောင်လမ်းပြနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအစည်းအဝေးများနှင့်အတူတက်ရောက်ကာ, စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အချိန်မီနှင့်သိကောင်းစရာများသုံးရက်ကြာအစီအစဉ်ကိုပူဇော်ပါလိမ့်မယ်။ ထို program ၏အရည်အသွေးယခုနှစ် High-profile ကိုပြောရမှာစပီကာများကသရုပ်ပြနေသည်: Francisco က Artes, MaxPlay များအတွက်အိုင်တီနှင့်လုံခြုံရေးအကြီးတန်းညွှန်ကြားရေးမှူး; Ron Rackley, PE, duTreil, Lundin & Rackley Inc ၏မိတ်ဖက်တည်ထောင်သူ .; နဲ့ Jon N. Cowart, SpaceX နှင့်အတူ ပူးပေါင်း. NASA ရဲ့ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်လေယာဉ်အမှုထမ်းအစီအစဉ် (ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျတော်) အတွက်မိတ်ဖက်မန်နေဂျာ။
အဆိုပါကို IEEE အသံလွှင့်စာတမ်းဖတ်ပွဲအတွက်ကို IEEE အသံလွှင့်နည်းပညာလူ့အဖွဲ့အစည်း (BTS), ကို IEEE အဖွဲ့ဝင်များမှမရရှိနိုင်ထက်ပို 40 နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလူ့အဖွဲ့အစည်းတွေထဲကနေဖြင့်တင်ပြနှစ်ခုအဓိကနှစ်ပတ်လည်ညီလာခံတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ယင်းကို IEEE အသံလွှင့်စာတမ်းဖတ်ပွဲအပြင်၌, IEEE BTS Broadband အပေါ်ကို IEEE International ကစာတမ်းဖတ်ပွဲကူညီပံ့ပိုး မာလ်တီမီဒီယာ စနစ်များနှင့်အသံလွှင့်တိုင်းနွေဦး။
ယင်းအသံလွှင့်လယ်ပြင်၌ပြောင်းလဲမှု၏မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အရှိန်အဟုန်အသစ်သောစိန်ခေါ်မှုများနှင့်အခွင့်အလမ်းများကို generate ဆက်လက်အဖြစ်, BTS သည်၎င်း၏ပိုပြီး-ထက် 2,000 အဖွဲ့ဝင်များကလက်ရှိနေဖို့အတှကျစံပြလမ်းပေးပါသည်။ tenured ပါမောက္ခမှဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားများ, စက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်များမှကမ္ဘာကျော်သုတေသီများ - - ပညာရေးအခွင့်အလမ်းများပါဝငျနှင့်တပုဒ်ကိုရှာတှေ့နိုငျဟာသူ့ရဲ့အဓိကမှာ BTS သည့်ရောင်စဉ်တန်းကိုဖြတ်ပြီးကနေထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာများနေရာကိုပူဇော်သက္ကာဘို့, သင်ယူမှုတစ်အသိုင်းအဝိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်ခုနှစ်စဉ်ညီလာခံတင်ဆက်ထားပါတယ်နှင့်အချိန်လဲ tutorial hosting အပြင် NAB ပြရန် နှင့် IBC, BTS နှစ်တွင်တစ်လျှောက်လုံးအမျိုးမျိုးသောကြိမ်နှင့်တည်နေရာမှာအထူးဒီဇိုင်းအစီအစဉ်များကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းသားများကိုထံမှပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များစည်းချက်မြန်အီလက်ထရွန်နစ်မှစတင်လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်သင်တန်း, "အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာများအတွက် IP ဗီဒီယို," ။ အဆိုပါတစ်ရက်သင်တန်းအိုင်ပီကွန်ယက်ကိုကျော်ကဗီဒီယိုအချက်ပြမှုများကိုထုတ်လွှင့်ဖို့အသုံးပြုသော့ချက်နည်းပညာများမှာအသေးစိတ်ကြည့်ပေးပါသည်။ အဆိုပါ IP ကိုဗီဒီယိုကသင်တန်း "ဟုအဆိုပါ Gap ပေါင်းကူး: အင်ဂျင်နီယာများများအတွက်ဗီဒီယိုနှင့်အိုင်တီနည်းပညာ," ပူးပေါင်းမည်ရိုးရာကိုဗီဒီယိုထုတ်လွှင့်အတွက်နက်ရှိုင်းသောအတှေ့အကွုံရှိသည်သောနည်းပညာသမားတွေနဲ့သောသူတို့အားအကြားအများအပြားခေတ်သစ်ထုတ်လွှင့်အဆောက်အဦများတွင်တည်ရှိသောအသိပညာကွာဟမှုဖြေရှင်းရန်ဒီဇိုင်းနှစ်ရက်ကြာအပြန်အလှန်နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ ဒေတာအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ကွန်ပျူတာကွန်ရက်၏အသိပညာအထူးပြုပါပြီ။
ဒါ့အပြင်အဆိုပါကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကထိကအစီအစဉ်မှတဆင့်ကို IEEE BTS အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအခနျးတှငျအစညျးအဝေးမှာစကားပြောကာကထိကဖိတ်ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ အဖွဲ့ဝင်များသူတို့တွင်နီးပါး 15 တင်ဆက်မှုအကြောင်းအရာများပူဇော်သူကို 50 ပုံမှန်ကထိကထက်ပိုထံမှရွေးချယ်နိုင်သည်။
အွန်လိုင်းမှတ်ပုံတင်ရေးအပါအဝင် 2015 ကို IEEE အသံလွှင့်စာတမ်းဖတ်ပွဲနှင့်ပတ်သက်ပြီးပိုမိုသိရှိလိုပါက, မှာရရှိနိုင် bts.ieee.org/broadcastsymposium။ ယင်းကို IEEE BTS အကြောင်းကိုအပိုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်မှာရရှိနိုင် bts.ieee.org/.
2015 NAB ပြရန် 2015 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2015 NAB ပြရန်သတင်းများ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း NAB 2015 NAB ပြရန် Show ကို 2015 NAB NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ NAB Show ကို Las Vegas မှ Show ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း NAB NAB15 nabshow လူငယ်ကဏ္ဍ Show ကိုအမျိုးသားအစည်းအရုံး Post ကိုထုတ်လုပ်မှုကမ္ဘာ့ဖလား sprockit ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2015-09-28
ယခင်: နယူးနဲ့ပြန်ရောက်ကျဆုံးခြင်းစီးရီးတွေနဲ့အလုပ်များ Technicolor PostWorks
နောက်တစ်ခု: CSP မိုဘိုင်း Productions Fox ကဘောလုံးထုတ်လွှင့်စဉ်အတွင်းနောက်ထပ်ချွေ Fiber ပို့ဆောင်ရေးဘို့ယောသပ်သည်အီလက်ထရောနစ် Picks